Eyona tadalafil ipowder yaseTshayina ifektri yoMvelisi
I-CMOAPI ngumenzi wamayeza wokuhambisa umgangatho ophezulu we-tadalafil powder kunye ne-tadalafil Phakathi, amandla enyanga anokufikelela kwi-3100kg, kwaye abe nenkqubo ebanzi yolawulo lomgangatho (ISO19001) kunye nenkqubo yolawulo lokusingqongileyo (14001)
Thenga iTadalafil Powder
I-Tadalafil powder eluhlaza
Umlingo weTadalafil Powder: Ukusetyenziswa, iziBonelelo, iDosi, Iziphumo ebezingalindelekanga kunye nokunye
Isebenza njani iPowfilfil Powder
Izibonelelo zokusebenzisa iTadalafil Powder
Ngubani onokusebenzisa i-Tadalafil powder
Ulwazi lweeDosi kunye nendlela yokuThatha iTadalafil Powder
Iziphumo ebezingalindelekanga zokusebenzisa iTadalafil Powder
Apho unokuthenga khona iTadalafil Powder kwi-Intanethi
Eminye imibuzo kunye neempendulo kwiTadalafil (Cialis) powder
Ukuthenga i-Tadalafil Powder kwi-CMOAPI
Ukungasebenzi kakuhle kwe-Erectile (ED) kube yingxaki abantu abaninzi abajongane nayo kwaye bayaqhubeka nokulwa nayo yonke imihla. I-ED yenzeka xa i-penis ingakwazi ukugcina ulwakhiwo ngenxa yamanqanaba asezantsi e-nitric oxide ebangelwa luxinzelelo okanye ezinye izinto ezinje ngeswekile, inqanaba eliphezulu le-cholesterol, ukutyeba kakhulu phakathi kwabanye kukhokelela ekubeni ingakwazi ukuhlala nzima ngokwaneleyo ukungena ngenxa yokunqongophala kobunzima .
I-Tadalafil powder isetyenziselwa ukunyanga i-ED emadodeni. Yonyusa ukuhamba kwegazi, oko kunokukhokelela kulwakhiwo olungcono ngexesha lokuvuselelwa ngokwesondo. Uphando lwe-Tadalafil powder luye lwabonisa ukubaluleka kwalo ekunyuseni umgangatho wokwakhiwa, ubude besini, ukwaneliseka ngokwesondo, amanqanaba okuzithemba ngokubanzi-konke ngaphandle kokubangela ukungahambi kakuhle okanye iimvakalelo ezingafunekiyo zihlala zihambelana namanye amayeza e-erectile dysfunction.
Kule nqaku, siza kugxila kwi-tadalafil eluhlaza kunye neenzuzo ezinokuzisa kwimpilo yakho yesondo. Siza kuphinda sihambe ngendlela yokusebenza kwayo, izibonelelo, ukusebenza kakuhle, idosi, kunye nokufumaneka.
I-Tadalafil powder, ekwabizwa ngokuba yi-tadalafil citrate yindawo yezinto eziphilayo efumaneka kwiipilisi ze-tadalafil. Yaphuhliswa nguPfizer Inc.ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED) phantsi kwegama lophawu lweCialis®.
Yaziswa kwiipilisi ze-tadalafil njenge-tadalafil yinkampani yamayeza yaseFransi eyaziwa ngokuba yi-Laboratoire LFB.
I-Tadalafil powder ivunyiwe yi-US Food and Drug Administration (FDA) yokunyanga i-erectile dysfunction (ED). Eli chiza lelikudidi olubizwa ngokuba yi-phosphodiesterase-5 (PDE-5) inhibitors, kunye neTadalafil isebenza ngokuphumla kwezihlunu ezigudileyo kwimithambo yegazi. Ikhuthaza ukuhamba kwegazi kwilungu lakho lobudoda ukuze likwazi ukuqina ngokwaneleyo ukuze ulalane ngempumelelo.
Ngaphandle kokungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED), i-tadalafil ikwasetyenziswa kunyango lwezinye izifo ezinje nge-pulmonary arterial hypertension kunye ne-benign prostatic hyperplasia (BPH). Ngokuqinisekileyo sisiyobisi kwaye ngenxa yoko akufuneki sithathwe ngaphandle kolawulo lweengcali zonyango.
Kwasekuqaleni kwenkulungwane ye-20, i-tadalafil powder sele ifumene uthotho lwezilingo zeklinikhi. Ezi zilingo zaqhutywa ukumisela ukhuseleko kunye nokusebenza kwe-tadalafil powder kunye neetafile ze-tadalafil.
Uphando lwe-Tadalafil olungumgubo lubonisa ukuba unyango lwe-tadalafil eluhlaza kunye neepilisi ze-tadalafil zinciphisa kakhulu iimpawu ze-erectile dysfunction (ED) kubemi bezigulana ezinamava okuyeka ukuya exesheni. Olu luntu lwezigulana lufunyenwe lubonisa iimpawu ze-tadalafil eluhlaza kunye neepilisi ze-tadalafil.
I-Tadalafil powder yi-PDE5 inhibitor, yeepilisi ze-tadalafil ezisetyenziselwa unyango lwe-erectile dysfunction (ED). Kwiminyaka yakutshanje ndibone ukunyuka okuphawulekayo ekusetyenzisweni kwe-PDE5 inhibitors njengonyango lokuqala kulawulo lwe-ED. Masibone ukuba i-tadalafil iphucula njani ukusebenza kwe-erectile:
● I-Tadalafil powder iphucula ukusebenza kwe-erectile ngokuphucula ukuphumla kwemisipha egudileyo kusetyenziswa i-PDE5 inhibition (VIAGRA) kwi-corpus cavernosum yelungu lobudoda ngexesha lokuvuselelwa ngokwesondo, kukhokelela ekwandeni kokuhamba kwegazi kule ndawo.
● I-Tadalafil powder isebenza njenge-vasodilator yamadoda ane-erectile ED. Ihlaziya ngokufanelekileyo imithambo yegazi inceda ukufezekisa kunye nokugcina ulwakhiwo.
● I-Tadalafil powder ifakwe ngokukhawuleza kwinkqubo, ngokuqhelekileyo ibonisa umphumo we-tadalafil kwi-half half of taking. Ihlala isebenza ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-36 inika ixesha elide lokuba neentlobano zesini ngaphambi kokuba kufuneke enye idosi ye-tadalafil powder.
● I-Tadalafil powder isebenza ngokuphumla kwimisipha egudileyo kunye nakwisinyi, ekhokelela ekwandeni kokuhamba kwegazi okuhlaziya umgangatho wakho we-pelvic. Kucetyiswa ukuba i-Tadalafil powder isebenza njenge-Sildenafil (Viagra) ipowder, kuphela ngaphandle kweziphumo ebezingalindelekanga kumadoda ane-prostate eyandisiweyo okanye ukugcinwa komchamo.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-tadalafil powder ivunyiwe yi-FDA kunyango lokungabi namandla kwamadoda. Lelona candelo liphambili leetafilefil eziveliswe ngokorhwebo ezinje ngeCIALIS kwaye inceda abaguli be-ED ukuba bafumane ulwakhiwo ngovuselelo olufanelekileyo.
I-Tadalafil powder yimveliso eluncedo kakhulu kumadoda ane-ED. Iimpazamo ezahlukeneyo ze-tadalafil zenziwe ngee-tadalafil ezahlukeneyo, ezenza ukuba zilungele ukusetyenziswa ngabantu abahlukeneyo.
Isisombululo sendalo sokungasebenzi kakuhle
Zininzi iindlela ngeendlela apho amadoda anokufumana iingxaki kulwakhiwo. Esinye sezizathu eziqhelekileyo zokungasebenzi kakuhle kwe-erectile kukungahambi kakuhle kwegazi ukuya kwilungu lobudoda. I-Tadalafil powder inceda ukuhamba kwegazi okungcono ngexesha lokuvuselelwa ngokwesondo.
Ukunyuka kwegazi okwandileyo kwenza ukuba abo, abanengxaki yokungakwazi ukufumana nokugcina ulwakhiwo, ukufumana igazi elaneleyo kwilungu lakho lobudoda ngoko kuhlala kunzima ngelixa usabelana ngesondo. Kufezekisa oku ngokuphumla kwemithambo yendawo ye-penile kunye nezihlunu ezijikeleze ipeni yakho ngokuhamba ngokulula kwegazi.
Yonyusa amanqanaba e-nitric oxide emzimbeni
I-Tadalafil powder sisiyobisi esinceda ekuphuculeni ukuhamba kwegazi kwi-penises ngokwandisa amanqanaba e-nitric oxide anokubangela ukuphumla.
Oku kwenza ukuba kube lula kwezi nqanawa ukuba zihlale zivulekile ixesha elide xa kufuneka njalo ukuze zikwazi ukulawula ulwakhiwo olungcono kunangaphambili - ngelixa zisenza ukuba kungabikho mfuneko yokugcina umonakalo ekubekeni kude kakhulu okanye kunqunyulwe ngenxa yokwanda kokuguquguquka ngokunjalo . Le yenye indlela ephucula ukuhamba kwegazi, ivumela ipeni ukuba ikhule yomelele kwaye iguquguquke ngakumbi.
Ukulwa neempawu zeBenign Prostatic Hyperplasia (BPH)
I-Tadalafil powder yinto esebenzayo kwi-Cialis, esetyenziselwa ukunyanga iimpawu zeprostate eyandisiweyo. Umsebenzi we-Tadalafil powder ngokuphumla kunye nokwandisa imithambo yegazi ukuze kubekho indawo yokuhamba komchamo ngaphakathi kwesinyi sakho (esaziwa njenge "vesicourethral function").
I-Tadalafil powder nalo lonyango olunokunceda ekunciphiseni iimpawu ze-BPH, ezinje ngobunzima ekuqalekeni kokuhamba komchamo kunye nokuhamba kobuthakathaka. Izibonelelo zeTadalafil powder zibaluleke kakhulu kwizigulana ezinengxaki yokuchama rhoqo okanye ngokungxamisekileyo ngexesha lasebusuku
Oososayensi bahlala befumana iindlela zokunyamekela imizimba yethu kunanini ngaphambili - kwaye i-tadalafil eluhlaza ingayimpendulo yokugcina ukusebenza kwentliziyo enempilo.
I-Tadalafil powder yongezwa ngokugqwesileyo nakweyiphi na indlu ejonge ukuhlala usempilweni kwaye uhlala ixesha elide kunye. Izibonelelo zalo zibandakanya ukunciphisa umngcipheko wesifo sentliziyo ngokwehlisa amanqanaba e-cholesterol ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-52.
Ngokungafaniyo namayeza kagqirha okanye imikhwa engeyiyo njengokutshaya imidiza; Indawo yendalo ayifuni naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga kwi-cholesterol okanye kumaxabiso oxinzelelo lwegazi (kwaye phantse akunakwenzeka ukuba ungabi likhoboka!)
I-Tadalafil powder inokunceda ukunciphisa i-CRPHS. Izifundo zibonise ukuba kuyingenelo kwimpilo yakho ye-cardiovascular health, eyenza i-tadalafil powder ibe yinto ekufuneka ibe nayo kwikhabhinethi yakho yeyeza.
Ukuthintela ukonakala kwemisipha
Iprojekthi yophando lwe-tadalafil yamva nje ifumene iTadalafil yokunceda abaguli bajongane nohlobo oluthile lwe-muscular dystrophy. Isifundo sijonge kwiTadalafil, enokusetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwamadoda, kunye nokubanakho ukunyanga esi sifo sinqabileyo sichaphazela ngaphantsi kwe-1% yabemi.
Uphononongo luphande ukuba iTadalafil powder enikwa njani njengonyango lwe-ED inokuba nazo izibonelelo ngokubhekisele kwimpilo yemisipha-ngakumbi xa kufikwa kumba wokujongana nolunye uhlobo lwe-muscular dystrophy ebizwa ngokuba yi-Becker's Muscular Dystrophy (BMD). Esi sifo sinqabile siphawuleka ngenxa yokuba buthathaka kwezihlunu kunye nokunqongophala kokusebenza.
Xa i-BMD iqala ukuvela oogqirha becinga ukuba ezi meko zibangelwe kukwakhiwa okanye ukuveliswa kweeprotein ezineasidi ngaphakathi kwezihlunu ngokwazo; Nangona kunjalo, abaphandi bafumanise ukuba yintoni kanye kanye ebangela esi sifo nendlela esinokuqala ngayo ukunyanga abo bachaphazelekayo.
I-Tadalafil powder, xa ichazwe kumayeza amancinci, inokukwazi ukunciphisa okanye ukuyeka le fomu yokugula okugwenxa ekubeni ibe yimbi ngakumbi.
I-Tadalafil powder yinto ethile yokuphucula isongezelelo sendoda. Inika amadoda isisombululo sendalo yonke kukungasebenzi kakuhle kwe-erectile kunye ne-ejaculation ngaphambi kwexesha; imiba emibini ebaluleke kakhulu amadoda amaninzi asokolayo kuyo. Iipilisi ezincinci ezimhlophe zenziwe ngezinto zendalo, ezenza ukuba zikhuseleke kuye nakubani na ofuna ukuqala ukonwabela isini esihle!
Ngapha koko, i-tadalafil powder ayisiyondlela nje elungileyo yokwenza ulwakhiwo lwakho lube lude kwaye lomelele, inokukunceda ulawule uxinzelelo lwegazi oluphezulu, usetyenziswe ziimbaleki njengoncedo olusebenzayo lwangaphambi kokuzilolonga, kwaye uncede amadoda aneprostate eyandisiweyo.
Ukuba i-tadalafil powder sisiyobisi sakho sokuqala esonyusa isini, kuya kufuneka wenze uphando lwe-tadalafil powder, funda malunga ne-tadalafil ngokubanzi, funda ngendlela i-tadalafil esebenza ngayo kunyango lwe-erectile dysfunction. kwaye okona kubaluleke kakhulu, thetha nogqirha wakho.
Ilawulwa ngomlomo; I-tadalafil powder idilizwe sisibindi emva kokungena egazini, kwaye inokuthathwa kanye ngemini okanye xa kufuneka njalo.
Umthamo ophakanyisiweyo we-tadalafil wabaqalayo yi-5 mg ye-tadalafil eluhlaza eluhlaza ethathwe rhoqo emva kweentsuku ezimbini ukutya okanye iziselo. Qala ngale dose kwaye ukuba uziva ufuna ngaphezulu, ngokuthe ngcembe ukonyuka uye kwi-10 mg. Unokonyusa i-tadalafil powder dosage ukuya kwi-25 mg / ngosuku ukuba iyafuneka, kodwa hayi ngaphezulu koko.
Kukwabalulekile ukuba ungathathi i-tadalafil powder kade kakhulu emini kuba inokukugcina ebusuku.
I-Tadalafil powder ingaxutywa kwisiselo okanye ithathwe ngokutya. Kufuneka igcinwe kwisitya sokungena ngaphakathi kude nobumanzi kunye nobushushu obuphezulu. Kuya kufuneka ugcine i-tadalafil powder kude nelanga ngokuthe ngqo kuba iyakuphuka ukuba ibonakaliswe kukukhanya kwe-UV ngaphezulu kwemizuzu embalwa.
I-Tadalafil powder ithandwa phakathi kwabadlali abafuna ukufumana imiphumo emihle ye-tadalafil ngaphandle kokugwinya iipilisi okanye iipilisi, abantu abanobunzima bokugwinya iipilisi (njengabantu abadala), kunye nabantu abafuna nje ukusebenzisa iifomula ze-tadalafil ezilula Akufuneki bathathe iipilisi ezizodwa ze-tadalafil.
Kuba i-tadalafil powder inyibilika ngokukhawuleza, unokumane uxuba i-tadalafil eluhlaza eluhlaza kwisiselo okanye uyixube nayo nayiphi na into yokutya kwaye awuyi kufuna ukulinda ixesha elide ngaphambi kokuba i-tadalafil ikhabe.
I-Tadalafil powder isebenza kwi-enzyme ebizwa ngokuba yi-phosphodiesterase type 5 (PDE-5), evuselela izihlunu ezijikeleze imithambo yegazi kumadoda nabasetyhini kwaye inceda ekuphuculeni ukuhamba kwegazi kubasebenzisi abaninzi.
Nangona kunjalo, i-tadalafil powder ayisebenzi kuwo wonke umntu, kwabo bangaboni naluphi na uphuculo kunye ne-tadalafil, kukho iziphumo ebezingalindelekanga abanokuthi bazifumane ngelixa bethatha i-tadalafil. Olu ayilo luhlu lupheleleyo lweziphumo ebezingalindelekanga ze-tadalafil, ezinye zinokwenzeka:
● Uxinzelelo lwegazi- Esi sisiphumo secala esichaphazeleka ngokufanayo xa uthatha i-tadalafil kwaye inokuba nobulali kwaye kufuneka inyamalale xa uyekile ukuthatha amayeza.
● Intloko - Abanye abantu banamava entloko xa bethatha i-tadalafil ehlala iiyure ezingama-24 ubuninzi. Oku kunokuba nzima kwaye ukuba kuyaqhubeka kufuneka ufune uncedo lwezonyango kwangoko.
● Isicaphucaphu / Isisu esibuhlungu- Ukuba ufumana isicaphucaphu, ukugabha, okanye urhudo ngenxa yotywala kakhulu, i-tadalafil, okanye ukuzilolonga kakhulu kuya kufuneka ufumane uncedo lwezonyango ngokukhawuleza.
● Ukugruzuka -Kukho iimeko ezithile ezirekhodiweyo apho abantu beva ukopha ezimpumlweni okanye kwiintsini kunye nokugruzuka xa besela eli yeza. Kuya kufuneka usoloko ufuna uncedo lonyango xa ubona naziphi na iimpawu zokopha okungaqhelekanga.
● Ukugcinwa komchamo-Esi sisiphumo esinqabileyo esecaleni kwaye senzeka ngaphantsi kwe-1% yabasebenzisi, kulapho umzimba ungawukhululi khona umchamo ngokufanelekileyo onokuba yingozi xa ushiywe unganyangwa.
● Umbono Utshintsho- Olu tshintsho lunqabile kwaye i-tadalafil ithathwe ngabantu abangaphezulu kwezigidi ezili-10 kwihlabathi liphela, nangona kunjalo, ukuba ufumana naluphi na utshintsho kumbono ngenxa yeliyeza kufuneka wazise umboneleli wakho wezempilo kwangoko. Kuya kufuneka uphephe ukuqhuba okanye ukuzibandakanya kuyo nayiphi na into eyingozi ngelixa uthatha la mayeza.
● Ukudumba kwi-Ankle okanye kwiinyawo zakho - Abanye abasebenzisi bafumana ukudumba emilenzeni, emaqatheni nasezinyaweni xa bethatha eli yeza elinokuhamba nerhashalala kunye nokurhawuzelela. Ukuba uyazibona ezi mpawu ngelixa usela amayeza, nxibelelana nogqirha ngokukhawuleza.
Iziphumo ebezingalindelekanga zinokwahluka phakathi kweetadalafil zeepowder batches, kodwa ezona zinto zixhaphakileyo tadalafil powder iziphumo ezinamava ziintloko ezihamba kancinci kunye ne-flushes (irhashalala elukhuni elixhaphake kakhulu phakathi kwemiyalelo ye-tadalafil enikezwe ngeedosi eziphezulu), ngakumbi emva kokusela utywala okanye ukuthatha i-alpha- iarhente yokuthintela iadrenergic (njenge tamsulosin).
Ukuthengwa kwe-tadalafil eninzi powder kulula kakhulu namhlanje. Ungathenga i-tadalafil powder kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo kwi-intanethi kubandakanya i-tadalafil powder alibaba, i-tadalafil powder pakistan, i-tadalafil powder usa, i-tadalafil powder india, i-tadalafil powder forum njl.Nangona kunjalo, ezinye zeendawo zihloniphekile kunezinye ngoko kufuneka uqaphele xa Ukuthenga kwindawo ongayiqhelanga.
Njengomthetho wesithupha, kuya kufuneka uqaphele ezi zinto zilandelayo xa uthenga i-tadalafil powder;
1. Qinisekisa ukuba kukhuselekile ukuthenga i-tadalafil eluhlaza kwi-intanethi kwindawo oyikhethileyo;
2. Qiniseka ukuba banikezela nge-100% yokwenene eluhlaza ye-tadalafil powder ngaphandle kwezongezo (ukuba kunokwenzeka);
3. Qinisekisa ukuba banikezela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali malunga ne-tadalafil powder xa kuthengiswa, ukuba awonelisekanga ziziphumo;
4. Qiniseka ukuba indawo inenkonzo enkulu yabathengi kunye negama elihle;
5. Khangela ezinye i-tadalafil zokuphononongwa kwepowder ukubona ukuba bathini abanye abantu malunga nesiza (baninzi phaya ngaphandle);
(1) Ihlala ixesha elingakanani i-tadalafil powder?
Ukusetyenziswa kwe-Tadalafil powder kunokufikelela kwiiyure ezingama-36. Inokukunceda ukugcina ulwakhiwo lwakho nasemva kokuphuma. Ukuba ulwakhiwo luhlala ixesha elide kuneeyure ezingama-4, funa unyango lwangxamisekileyo kuba oko kunokukhokelela kumonakalo osisigxina.
(2) Ngaba i-tadalafil powder ilungile njenge-Cialis powder?
Zombini ezi zinto ziqulathe isithako esisebenzayo esasisetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile; Umahluko kuphela kwi-tadalafil yinguqulelo yohlobo oluqhelekileyo.
(3) Ngaba i-tadalafil powder yomelele kune-sildenafil powder?
Zombini ziyasebenza ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile, kwaye umahluko ophambili phakathi kwezi zimbini kukuba i-tadalafil powder ihlala ixesha elingakanani xa kuthelekiswa ne-sildenafil powder. I-Tadalafil powder inokuhlala ukuya kuthi ga kwiiyure ze-36 emzimbeni, ngelixa i-sildenafil powder iphela kuphela ukuya kwiiyure ze-5.
(4) I-Tadalafil Powder Recipe: Ungayixuba njani i-tadalafil powder kwifom engamanzi
Ungajonga ulwazi ngakumbi malunga nesikhokelo sendlela yokwenza i-tadalafil powder kwifom yolwelo ngokulandela eli khonkco, emva koko uyenze inyathelo ngenyathelo iya kulunga.
Ukuba ufuna ukukhuseleka kwaye uqiniseke ukuba ufumana i-100% yokwenyani ye-tadalafil eluhlaza ekhululekile kuzo zonke iintlobo zezinto zangaphandle kuya kufuneka usizame.
I-CMOAPI yeyona ndawo ifanelekileyo yokuthenga i-tadalafil powder ngobuninzi, enokunikezela ngemveliso ekumgangatho ophezulu eyenziweyo kwizibonelelo ezivunyiweyo ze-GMP kunye ne-DMF. Awuyi kufumana mgangatho ongcono kwenye indawo!
Ngaba ufuna indlela elula neqondayo yokufumana into oyifunayo ngaphandle kokuya kuwo wonke laa ngxaki? Nathi, akunakuba lula! Konke okufuneka ukwenze kuku-odola kwi-Intanethi okanye utsalele umnxeba omnye wabameli bethu kwaye siya kuyikhathalela yonke into ukusuka apho.
Ayinamsebenzi ukuba uhlala eMelika okanye eYurophu, nathi singathumela kwihlabathi liphela naphi na apho ukhoyo, sinokukunceda kwiimfuno zakho. Ke musa ukulinda ixesha elide-cofa apha ngoku ukuze uthenge i-tadalafil powder kwiwebhusayithi yethu!
 uSriram D. Unyango ngamayeza. Pearson Education India, 2010. iphe. 635.
 UWang Y, uBao Y, uLiu J, uDuan L, uCui Y (ngoJanuwari 2018). "I-Tadalafil 5 mg Nje ukuba yonke imihla iphucule Iimpawu zoMchamo osezantsi kunye nokungasebenzi kakuhle kwe-Erectile: Uphengululo lwenkqubo kunye nohlalutyo lweMeta". Iimpawu zeTrektara ezisezantsi. 10 (1): 84–92. ikhonkco: 10.1111 / luts.12144. Inkcazo: PMID 29341503. S2CID 23929021.
 Unonophelo lwezeMpilo eManyeneyo (Agasti 16, 2016). Isishwankathelo soNyango- Unyango lwabangenamandla (PDF). Uncedo lwezeMpilo eManyeneyo. Ukufunyanwa kwe-20 Dec 2016.
 "iTadalafil". Inkqubo yoNcedo lwaMayeza. Ukufunyanwa kwe-2020-08-19.
 URichards, Rhonda (Septemba 17, 1991). "ICOS Ku Crest Kumqolo Ojikelezayo". USA Namhlanje. iphe. 3B.
 "I-Tadalafil-Amanani okusetyenziswa kweziyobisi". KwiKlinikhi. Ukufunyanwa kwe-11 ngo-Epreli 2020.
 UKaye K. Ukuzuza. "I-Tadalafil (i-Cialis) kunye neVardenafil (i-Levitra) iziyobisi ezivunyiweyo kutshanje ze-Erectile Dysfunction". Ukuthintela.
 "I-Cialis tadalafil PI". Ulawulo lweeMpahla zoNyango. Ukufunyanwa kwe-2020-08-19.
 IBorthwick AD (ngoMeyi 2012). "I-2,5-Diketopiperazines: I-synthesis, Reactions, Medicinal Chemistry, kunye neMveliso yeNdalo ye-Bioactive". Uphengululo lweMichiza. 112 (7): 3641-3716. ikhonkco: 10.1021 / cr200398y. IINKCUKACHA: